Igama elithi "imbala 'lisenza inhlangano unwitting nge umshini nzima yakhelwe ukugcina esiningi ukudla. Kodwa, isibonelo, abantu ngokuvamile kokushiya namanye esake sawenza sisendleleni emaphandleni, efikayo engqondweni, futhi into ezifana esikhwameni ezipholile.
Le nto isetshenziswa kokuthutha ukolweni omncane imikhiqizo ukulondolozwa edinga ukunamathela lokushisa ongaphakeme. Ngokuvamile kungasiza ukuthutha inyama izoso, iziphuzo, ayi nokunye. N. Njengoba isikhwama cooler Kulula kakhulu ukusebenzisa futhi ububanzi lebanga lentengo lapho wonke umuntu uyokwazi ukukhetha into ukunambitheka kanye namathuba yakho udumo ezweni lethu la izesekeli lukhula iminyaka ngeminyaka.
Uma sikhuluma iqiniso, akubona bonke izikhwama cooler kungaba lesifanele ukuyibiza nesiqandisi. Iningi lawo abantu Thermos noma amabhokisi abandayo, njengoba lezo azikho Ukuphola, kodwa ngoba ziyakwazi kuphela isikhashana igumbi lokushisa ephansi.
Cool isikhwama futhi sikwazi ukulondoloza lokushisa ongaphakeme kungakapheli amahora 5 kuya 12. Ukwandisa le nkathi usebenzisa ekhethekile accumulator abandayo, okuyizinto zithutha encane ligcwaliswe ukushisa umthamo isixazululo ekhethekile. Ngaphambi kokusebenzisa kubo kufanele ubanjwe efrijini amahora angu-10, bese ifakwa esikhwameni ezipholile. Njengoba elinye ithuba briquettes ingasetshenziswa iqhwa elomile.
Nokho, igama elithi "Cooler Bag" isivele ngokuqinile kakhulu ezingxenyeni izingqondo ezakhamizi zethu, ngakho sizoqhubeka ukuyisebenzisa.
Uhlobo lokuqala bag-eziqandisini kukhona thermobags ezivamile. Zingenziwa esusela inayiloni and plastic. Uma usayizi into encane, it angadluliselwa esebenzisa ipeni abavamile. Uma isikhwama unamahlangothi umxhwele, it is unikezwe amasondo isibambo ekhethekile retractable nokuhamba lula. Njengomthetho, inani lemali kukhawulwe amalitha angu-50 Thermos.
Enye izinhlobonhlobo izikhwama esiqandisini zihlanganisa iziqukathi ezishisayo. Zivame eyenziwe ngepulasitiki, nevolumu kwazo kuvela 1 150 wamalitha. Izindonga isitsha egcwele amagwebu, phezu ivalwe ngo lid uphawu. amabhokisi Compact anemisila isibambo ephakathi nendawo. Iziqukathi yobukhulu aphakathi kukhona izibambo ezimbili ezinhlangothini. Amadivayisi anjalo bayakwazi ukulondoloza lokushisa njalo ngamahora angu-12.
Cooler isikhwama imoto - lena ukuvela phambi kwethu isigaba. umehluko ngisho nezinhlobo eziyisisekelo esikhwameni odlule ukuthi ifakwe i Ukupholisa iyunithi electronic, okuvumela hhayi kuphela ukulondoloza lokushisa elifanayo, kodwa futhi kuphole noma reheat ukudla. Isebenza isiqandisi kusukela usikilidi imoto elula.
Ngokuvamile, isikhwama ezipholile, ukubuyekezwa amamodeli izinhlobo okuyinto lingama omuhle, bangaba isihloko ewusizo kakhulu futhi esisemqoka cishe yonke imindeni.
Imbali stencil ebodeni: decor yasekuqaleni
"Vasilisa," zokulala: Izibuyekezo ikhasimende
China Rose - imbali sokufa noma litshwayo lobuhle besifazane?
Cell Hambayo "Keneksi": kuzibuyekezo, izintengo
U-Aleksey Mihaylovsky - "ucabanga tank 'yephrojekthi TV" Dom-2 "
I ububanzi hydrogen molecule isakhiwo ifomula. Uyini mass engqamuzaneni hydrogen?
Into yokucocobalisa Bork T700: Uhlolojikelele, umhlahlandlela, izici kanye nokubuyekeza
Indlela liziphathe nentombazane ezimweni ezahlukene?